Izahay 27 mianadahy izay nasaina hanotrona ny Filoha Ravalomanana dia nifanao fotoana tao amin'ny Carlton efa tamin'ny 6ora hariva. Tonga ny tamin'ny 07ora dia niatrika ireo mpanao gazety nanoloana ny tranoben'ny TVM etsy Anosy.
Nilaza anefa ny Talen'ny TVM fa olona 05 ihany no mahazo miditra araky ny fandaminan'ny CENI.
Dia niroso teo ambavahady, izay feno miaramila, izahay 05 efa voalaza mialoha, hanotrona ny Filoha Ravalomanana.
Rehefa niavaka teo aloha teo anefa izahay sy nofantarina anarana, dia nampitaina tany amin'ireo tompon'andraikitra. Nilatsaka anefa ny teny avy any hoe, tsy misy mahazo miakatra indray, fa aleo ho avy aloha ny Kandida roa, dia ry zareo no manapaka raha asiana mpanotrona na tsia.
Nandrasana tety ivelan'ny vavahady ireo kandida. Tsy dia nisy mpanotrona ny Kandida N°13 teo afatsy fiara iray izay ihany. Ny mpomba an'i 25 kosa dia feno teo.
Nandeha anefa ny feo fa hoe tsy mety hiatrika débat ny N°25, ka izay no mahatara ny fihaonana.
Tsy marina anefa izay satria nifandray tsy tapaka tamin'ireo mpikarakara ny Filoha Ravalomanana.
Tonga ny tamin'ny 19h50, izahay no niteny tamin'ny tompon'andraikitry ny TVM fa tsy tokony ho tara noho ny resaka fandaminana efa tapaka tamin'ny alakamisy ny fotoana.
Nandray fanapahan-kevitra ary ny Talen'ny TVM hoe aleo ianareo 05 miakatra ary miandry ao amin'ny 2è étage, dia hita eo rehefa tonga ireo Kandida.
Vao nipetraka kely ny efitrano izahay, dia tonga ny Filoha Marc Ravalomanana.
Nifampiarahaba teo, ianao no Patrick Raharimanana hoy izy, sady somary elaela ny fifandraisan-tanana. Serge Zafimahova no namaly azy, nanao ny présentation.
Dia samy nipetraka, zaho moa teo ankavan'ny Filoha Ravalomanana no napetraka. Nitodika taty amiko ny Filoha Ravalomanana, ary nanazava ireo document marobe vao nalefan'ny Banque mondiale taminy, miaraka dossier ONU. Efa feno mpanao gazety moa teo, dia notohizany nazavaina tamin'ny mpanao gazety ilay resaka.
Tonga ny CENI avy eo, ka niangavy ny Filoha Ravalomanana hiakatra hifandinika amin'ny Kandida N°13 satria izay vao tonga izy, momba ny fandaminana ny hisian'ny mpanotrona na tsia.
Ny Filoha Ravalomanana moa entitra, nilaza fa tsy resaka isa no inona, fa ny fanajana izay zavatra efa niarahana nanapaka nandritra ny fanomanana tamin'ny alakamisy, ary ny ekipako hoy izy dia tsy maintsy miaraka amiko.
Nanaiky niakatra tany ihany anefa izy sy Serge Zafimahova. Naharitra 30 minitra ireo tany, efa 8h30, nefa ny fandaharana tokony nanomboka ny 08ora alina.
Tonga ny CENI avy eo, naka anay 04 mbola taty ambany.
Niakatra izahay ary niditra ny studio, efa nipetraka tamin'ny toerany avokoa ireo kandida, sy ireo mpanohana ny N°13.
Navoaka ireo mpanao gazety sy mpaka sary ivelan'ny an'ny TVM tokony hijanona tao. Navoaka ihany koa ireo olona ankoatran'ny 05 avy.
Nijery ahy ny Kadida Rajoelina, ka nanondro ahy hoe ianao angaha miaraka amin'i Ravalomanana, sady nanondro an'i Filoha Ravalomanana izy. Eny hoy aho tamin'ny lohako.
Nijery ny vadiny izy, dia niondrika avy eo no nisainto tokana.
Mbola tsy nanaiky anefa i Andry Rajoelina, fa iza hoy izy, ireo olona 2 aoriana ireo, fa ampiana koa ny anay raha miampy roa ny anareo.
Mpiasan'ny TVM ireo hoy ny tompon'andraikitra. Tsy resy lahatra loatra i Andry Rajoelina, dia mbola nanontany hoe mpiasan'ny TVM ahoana?
Tsy nisy nanohy moa ny resany, dia nanaiky ihany izy hanomboka.
Nolazaina taminay moa ny fitsipika fa ny mitehaka ihany no azo atao, fa tsy mahazo mioraka.
Tsy zazakely moa no teo, ary dia samy nanaja ny fandaminana.
Vita moa ny fandaharana, dia nitsangana aho niarahaba ny Filoha Ravalomanana, nanontany ahy izy ny fahitako ny resaka. Mety tsara hoy aho ary maharesy lahatra ny Malagasy maro ireny.
Nanohy ny fiarabana ireo mpanentana ny fandaharana aho, dia nisaotra moa ry zareo tamin'ny filaminana rehetra.
Nanantona ny Filoha Rajoelina aho hiarahaba azy, ny namana nanodidina teo moa dia narisarisa avokoa, azoko tsara ny antony. Nandray ny tanako i Rajoelina, sady nanontany niverimberina hoe, fa nahoana Patrick, fa nisy inona loatra, naninona ianao niaraka amin'i Ravalomanana. Nataoko tamin'ny lamosiny moa ny tanako, ary nirary soa azy aho.
Lasa mialoha ny ekipa N°13, ary niverina niresaka tamin'ny CENI sy nankahery ary nisaotra an'izy ireo aho.
Dia nanohy niresaka izahay sy ny Filoha Ravalomanana, niaraka nidina, ary dia nanao point de presse izy, dia naterinay teo amin'ny fiarany, nanaitra ahy fa izy tsy niditra tao aoriana fa naka devant izy tamin'ilay fiara nitondra azy.
Naveriny novoaina ny varavarany, sady niteny izy hoe, fantatro fa mbola tsy hatory ianareo izao fa mbola hiasa mafy, fa mahereza.
Vita moa ny teo dia nanohy tany amin'ny Télévision Skyone izahay. Efa tamin'ny 02ora maraina vao vita ny tany.